Nvidia Optimus သည်သင်၏ Linux laptop တွင် Bumblebee ကိုထည့်သွင်းခြင်း | Linux မှ
Nvidia Optimus သည်သင်၏ Linux laptop တွင် Bumblebee ကိုထည့်သွင်းသည်
moscosov | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
Nvidia Optimus ဆိုတာဘာလဲ။
ဤနည်းပညာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းသော Hybrid SLI နှင့် Hybrid Graphics တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ သင် Nvidia GPU ကို desktop ပေါ်ရှိ Nvidia Chipset နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုနှင့်ပေါင်းလိုက်သောအခါစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ယခု Optimus က Intel Sandy Brigde ပရိုဆက်ဆာများ (i3, i5, i7) နှင့် Nvidia Gpu တို့နှင့်အတူလက်ပ်တော့များ၌လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအလားတူပြုရန်။ ရိုးရိုးလေးပါဒီနည်းပညာကသင်လိုအပ်တဲ့အတိုင်း discrete နှင့် dedicated graph များအကြားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ပါကစနစ်သည်အလိုလျောက်ဂရပ်ဖစ်ကိုအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေပါက၎င်းသည် discrete graphics ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့စကားလုံးများဖြင့်:
“ အရင်မျိုးဆက်တွေလက်တော့ပ်တွေနဲ့မတူဘဲ၊ ခေတ်မီဂရပ်ဖစ်ကဒ်များကိုဟာ့ဒ်ဝဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့် Intel ပရိုဆက်ဆာများ၏ IGP နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသဖြင့်၊ ပရိုဆက်ဆာဂရပ်ဖစ်အားအထူးဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုသာအသုံးပြုရန်ပိတ်ထားစရာမလိုပါ။ Processor ကို pass-through channel တစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အထူးဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည်အိပ်စက်အနားယူနေစဉ်ဂရပ်ဖစ် chipset သည်ဂရပ်ဖစ်များကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို Laptop ၏ LVDS connector မှတဆင့် internal monitor သို့ဖြတ်သွားသည်။ သို့သော်၊ သီးခြားဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ အချက်အလက်သည်မော်နီတာကိုရောက်ရှိရန်အတွက်ဂရပ်ဖစ် chipset ကို ဖြတ်၍ သွားရမည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် Processor IGP အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ deactivate မဖြစ်နိုင်သဖြင့် activate and deactivating ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည်ဖြစ်ရမည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်အရာ၊ ထိန်းချုပ်သူမှဤကိစ္စတွင်ဆောင်ရွက်သည်။ » (Leanuxeros.com)
၀ င်းဒိုးမှာဒါကအဆင်ပြေပါတယ် (၀ င်းဒိုးနဲ့အဆင်ပြေတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာပေါ့၊ ) Linux ကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက် Nvidia မှတရားဝင်ထောက်ခံမှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တိုတိုဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့တယ်၊ တိုတို (သို့) အလယ်အလတ်ကာလတို့မှာတိုတိုနဲ့အလယ်လတ်မှာဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ၊ ကွန်ပြူတာအများစုမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး အားဖြင့်ဂရပ်များထဲမှတစ်ခုကိုသက်ဝင်စေ / ပိတ်ပါ BIOS, သောကြောင့်ဖြစ်ရပ်အတွက်သာအလွန်စိတ်ပျက်စရာမြင်ကွင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအရွက် ဘက်ပေါင်းစုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သီးခြား gpu သင်၌ရှိပါကအမှိုက်ပုံးသို့သွားနိုင်သည် Nvidia ဂရပ်ဖစ် တက်ကြွသော (ပုံမှန်အားဖြင့်) စွမ်းဆောင်ရည်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်ုပ်တို့ကို Matrix ကိုမှတ်မိစေပြီးဆွေမျိုးတစ် ဦး သို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းကိုဘက်ထရီတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အကြံဥာဏ်ကိုကြည်နူးစေသည်။ kernel 2.6.38 Laptop ဘက်ထရီတွေလျော့နည်းသွားပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကဆန္ဒပြသီချင်းတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာတယ် (ငါ့ကိစ္စအတွက်ဘက်ထရီကနှစ်နာရီအရှည်ကြာတယ်) ။
ဒါကြောင့် Linux ဘက်မှာတော့ဒီနည်းပညာကိုထောက်ပံ့ဖို့ပရောဂျက်တွေပေါ်ပေါက်လာပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး ပျားပိတုန်း. ပျားပိတုန်း ၎င်းသည် C ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော Open Source tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစီးပွားဖြစ် Nvidia driver သို့မဟုတ်အခမဲ့ version ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် အသစ်ကလွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကဗားရှင်း ၃.၀ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြားတီထွင်မှုများအရစွမ်းဆောင်ရည်မန်နေဂျာကိုအလိုအလျောက်သက်ဝင်စေနိုင်သည့်အတွက် GPU ကိုအမှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်သက်ဝင်စေသည်။
Bumblebee ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်ဖိုင်မှတပ်ဆင်နိုင်သည် https://github.com/Bumblebee-Project/Bumblebee/downloads
၏ repositories တွင် packages များရှိပါသည် Ubuntu ကို, Gentoo, မုတ် y debian.
ဒီ application ကိုငါသုံးတဲ့ distros နှစ်ခုမှာတပ်ဆင်လိုက်သည်။ debian y မုတ် သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝီကီ၏လက္ခဏာများကိုအောက်ပါ။
Arch ထဲမှာ Installation
ငါတို့ install လုပ်တယ် ပျားပိတုန်း ကနေ AUR
ပြီးတော့ငါတို့ install လုပ်ပါ ကျောက်တံတား ပါဝါမန်နေဂျာသိမ်းပိုက်နိုင်စေခြင်းငှါ
သငျသညျယာဉ်မောင်းသိမ်းပိုက်သွားလျှင် အသစ်က သင်သည်အောက်ပါ package များကို install လုပ်ရမည်။
စီးပွားဖြစ် Nvidia နှင့်အတူ
သင်က Nvidia driver များကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် AUR မှထို package များကိုထည့်သွင်းထားသည်။
အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျ install လုပ်ပြီး bumblebee ကိုလက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြောင်းစစ်ဆေးသည်
နှင့်မှော် ... Nvidia GPU ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဘက်ထရီပြတ်တောက်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘက်ထရီကိုသာကျန်တော့သည်။
ကျနော်တို့ထည့်ပါ ပျားပိတုန်း တွင် Daemons များ
Integrated တစ်ခုသက်ဝင်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်ပြီး Nvidia GPU နဲ့ application တစ်ခုကို run ချင်တယ်ဆိုရင် console ကနေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာသူကဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူကိုနေရာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောကဒ်သည်အလိုအလျောက်ဖွင့် / ပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သည် ကျောက်တံတား module တွေအပိုင်းမှာ -
တည်းဖြတ်သည် /etc/bumblebee/bumblebee.conf အောက်ပါလိုင်းကို driver section တွင်ထည့်ပါ။
ငါတို့အဲဒါကိုစစ်ဆေးပါတယ် PM နည်းလမ်း ကားထဲမှာဒီ
Debian ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း (စမ်းသပ်ခြင်း (သို့) Sid အတွက်သာ)
အရင်ဆုံး Bumblebee ကိုအရင် install လုပ်ရမယ် အခမဲ့မဟုတ်.
32-bit system ပေါ်တွင် 64 bit applications များကို run ရန်အတွက်အောက်ပါ pack များကို install လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
ကျနော်တို့ဒီ repositories ကထည့်ပါ /etc/apt/sources.list
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ကို ချ၍ ထည့်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူကို Bumblebee အုပ်စုသို့ထည့်သွင်းသည်။
အကယ်၍ application တစ်ခုကိုသီးသန့် GPU ဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက terminal တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်
အပြီးသတ်ဖို့၊ ဒီလျှောက်လွှာနဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအတော်လေးကောင်းတယ်၊ သူငယ်ချင်းတချို့ကမင်းကိုပြောနိုင်တယ် FromLinux ငါ Bumblebee ကိုတွေ့တဲ့အထိစီးပွားဖြစ် Nvidia ဒရိုင်ဘာတွေကိုငါသိမ်းဆည်းထားတဲ့ distros တွေထဲမှာ (Debian and Arch) install လုပ်ဖို့မအောင်မြင်တာကိုငါဘယ်လိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့တယ်၊ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နာရီမှာဘက်ထရီကပျမ်းမျှအားဖြင့်သုံးနာရီအထိရောက်သွားတယ် နာရီဝက်ခန့်နှင့်လက်တော့ပ်၏အပူချိန်မှာ ၅၄ °မှပျမ်းမျှ ၄၅ °သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
Nvidia သည် Linux ပေါ်တွင် Optimus ကိုတရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမခံရသရွေ့၊ သို့မဟုတ်သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင် propirrivers driver များရှိခြင်း၊ သင်၏ Nvidia GPU ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Bumblebee သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Nvidia Optimus သည်သင်၏ Linux laptop တွင် Bumblebee ကိုထည့်သွင်းသည်
ဒီယေဂို Urbina ဟုသူကပြောသည်
Diego Urbina သို့ပြန်သွားပါ
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးသူငယ်ချင်း😉ကြိုဆိုပါတယ်: D. ကံ bro ရဲ့အကောင်းဆုံး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ။ 😉
အမှန်တရားကတော့မကြာသေးခင်ကငါလက်တော့ပ်အသစ်တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါဂရပ်ဖစ်တွေကို NVIDIA ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရှိခဲ့သမျှသောကွန်ပျူတာအားလုံးမှာ၊ အမြဲတမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ထားနိုင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာများနှင့်အတူ၊ သူက Linux ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်သည်။
ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာ ၂ ခုသုံးပြီးနည်းပညာအသစ်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်အံ့သြခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် Linux ထောက်ခံမှုကအားနည်းတာ၊ အထောက်အပံ့မရှိတာကိုပိုပြီးအံ့သြသွားတယ်။
ဒါနဲ့ငါရေကူးကန်ထဲကိုခုန်ချလိုက်ပြီး Intel ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုကိုရွေးခဲ့တယ်။
အမှန်မှာအချို့သောဂိမ်းများသည်မှန်ကန်စွာမကြည့်ပါ (အလွန်သေးငယ်သောပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောစီးပွားဖြစ်ဂိမ်းများတွင်ကြီးမားသောအမှားများ) ။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ခိုင်လုံသောနှင့်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။
Intel graphics processor များကို kernel ကထောက်ပံ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ Linux distro ကို install လုပ်နိုင်ပြီး 3D acceleration ကိုဘာမှမလုပ်ပဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၊ ဂိမ်းများစသဖြင့် configure လုပ်ရန် (compile) လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ထို့အပြင် kernel ကို update လုပ်သည့်အခါ proprietary driver များနှင့်ပြန်လည်ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ free များနှင့်အတူအရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် driver များကိုယ်တိုင်သူတို့ update လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ drivers တွေကို version ကနေပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအနာဂတ်နဲ့အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ bug သေးသေးလေးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခြားမည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆိုငါကြော်ငြာချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Intel မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒရိုင်ဘာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်၊ Linux ကိုလက်ခံဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ပံ့မှုရဖို့ဆိုတာကွန်ပျူတာအသစ်တစ်ခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ။
အားနည်းချက်တွေရှိပေမဲ့လည်း Linux နဲ့အတူ 3D အထောက်အပံ့ကို "သေတ္တာထဲမှထုတ်ယူနိုင်ခြင်း" ကကျွန်တော့်ကိုလျော်ပေးသည်။
၎င်းသည် desktop ကွန်ပျူတာများကိုအကျိုးသက်ရောက်သလား။
Optimus ကို Laptop များတွင်သာရရှိနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ Moscosov ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပြissueနာဖြစ်သည့်ပရိုဆက်ဆာများနှင့်ပတ်သက်သည်။ ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ် ကြည့်ရှုပါ၊ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် GNU / Linux ပေါ်တွင်ဖွင့်ထားသောပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် multimedia animation ဖန်တီးရန်အတွက် desktop ကွန်ပျူတာကိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေပါသည်။ ငါကအနည်းဆုံးငါးနှစ်ကြာရှည်ခံစေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ i7 အသစ်ရဲ့ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Motherboard တွေ၊ အမှတ်တရတွေနဲ့ပရိုဆက်ဆာတွေအကြောင်းတောင်ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သင်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအကြံပြုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လုပ်နိုင်မလား? ငါအကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာကို ၀ ယ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဂရပ်ဖစ်ဒရိုင်ဘာတွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားအပြည့်ကိုပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က Windows မှာအလုပ်မလုပ်လို့ပါ။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Intel ကသူတို့ပြောတာတွေအတွက်တော်တော်တော်ပါတယ်။ အကယ်လို့မင်းတို့ hasefroch မှာကစားဖို့ dual boot ရှိမယ်ဆိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်ကအရမ်းဆိုးပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါပြောချင်တာကငါ linux mint 12 နဲ့ asus k53sc ရှိတယ်၊ ငါ့ကိစ္စအတွက်ငါထည့်ချင်တယ်
$ sudo aptitude ကို virtualgl-libs-ia32 နှင့် libgl1-nvidia-glx-ia32 ကို install လုပ်ပါ။
အမည်သို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်သည် "virtualgl-libs-ia32" နှင့်လိုက်ဖက်သောမည်သည့်အထုပ်ကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။
အခြားတ ဦး တည်းတပ်ဆင်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ bumbleebe သည်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာနားမလည်ပါ။ bumblebe ကိုမထည့်သွင်းမီ nvidia board ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားရန်လိုအပ်ပါသလားဟုကျွန်ုပ်မေးမြန်းပါသည်။
Bumblebee နှင့်ပတ်သက်သောထူးကဲသောရှင်းပြချက်။ ငါက Centos 5.7 ပေါ်မှာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိလား။ ငါထင်တာကတော့ elrepo.org မှာမရှိသေးဘူး။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှူငွေ။ Nvidia ရဲ့ desktop ကနေအကျိုးအမြတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှအတော်လေးကြာအောင်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုအစကနေပြန်စဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။
Application တစ်ခုသည် Nvidia ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဆိုလိုတာကဝိုင်နှင့်ဝိုင်မှတစ်ဆင့်ဂိမ်းတစ်ခုကိုကွပ်ကဲခြင်းအား optirun မှတစ်ဆင့်တင်ခြင်း။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးသော driver များသို့မဟုတ် free များကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါ၊ ဘာမှမဖြစ်ဘဲထိုအရာသည်အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သင်အလွန်ကောင်းပါသည်။ !!
စမ်းသပ်ခြင်း .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ .. Nvidia ကို အသုံးပြု၍ လျှောက်လွှာများကိုဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ console ?? မှကြိုဆိုပါ၏
သေချာတာပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ် Nvidia card ကိုသုံးချင်ရင် optirun ကိုသုံးဖို့ script ဖန်တီးပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်မှုကိုပေးဆဲဖြစ်ပြီး Minecraft နှင့်၎င်းအတွက်လိုအပ်သည့်ထူးဆန်းသည့်ဂိမ်းကိုကစားရန်ကျွန်ုပ် ပို၍ အသုံးပြုသည်
အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ထုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ nvidia နှင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
04: 00.0 3D Controller: NVIDIA ကော်ပိုရေးရှင်း GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
GIMP ကို ​​AdaptableGIMP ဖြင့်တစ်ဆင့်ချင်းလေ့လာရန်သင်ယူပါ
Debian Sid တွင်သစ်ကြံပိုးခေါက်ကို Install လုပ်ပါ